Moto Z2 Force နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | Motorola က
စီစဉ်ထားသည်အတိုင်း, လက်မှတ် Motorola က ယမန်နေ့ကနယူးယောက်မြို့၌ #hellomotoworld ပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည် ယင်း၏အဓိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအသစ်ဖြစ်သော Moto Z2 Force အသစ်ကိုပြသခဲ့သည်.
တစ်ဦးနှင့်အတူ အများကြီးပိုသန့်စင်ပြီးဒီဇိုင်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ၊ ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်လည်းဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုနှင့်အတူ, Moto Mods စီးရီး၏360ºကင်မရာဤသည်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Moto Z2017 Force နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။
1 ၎င်းသည်အတွင်းနှင့်အပြင်သစ် Moto Z2 Force ဖြစ်သည်
2 Moto Z2 အင်အားသုံးနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
၎င်းသည်အတွင်းနှင့်အပြင်သစ် Moto Z2 Force ဖြစ်သည်
ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ပြီး Moto Z2 Force အသစ်ကိုငါတို့တွေ့လိမ့်မည် Moto Z လိုင်းရှိအခြားကိရိယာများနှင့်ဆင်တူသည်နှင့်၎င်းသည်အခြေခံအကြောင်းရင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Moto Mods ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှု၊ ကုမ္ပဏီသည်မူလ Moto Z ထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဝေးလွန်း။ လမ်းလွဲမသွားနိုင်သည့်နည်းဖြစ်သည်။ Motorola ကဒီဇိုင်းကိုသန့်စင်လိုက်ပြီ, အသုံးပြုသူများသည်appreciateကန်အမှန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်တစ်ခုခု။
El လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်အောက်၊ ရှေ့၊ ရှေ့တွင်တည်ရှိပြီးယခုအခါတွင်အနည်းငယ်ပိုကြီးသည်။ ၎င်းသည်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာများ၏အမူအယာများကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး home screen သို့ပြန်သွားရန်သို့မဟုတ်မကြာသေးမီက application menu ကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင့်ကိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကအသုံးချပရိုဂရမ်မီနူးများကိုထိုခလုတ်တစ်ခုတည်းမှသာဖွင့်နိုင်သည်။
Terminal ၏အနားစွန်းများသည် ပို၍ သန့်စင်ပြီးပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်အသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည် ကင်မရာနောက်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ခြင်း၃.၅ မီလီမီတာနားကြပ်ပေါက်သည်ဖုန်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
ကင်မရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်း၏နှစ်ဆကင်မရာဖွဲ့စည်းမှုအသစ်သည်ဖွဲ့စည်းထားသည် နှစ်ခု 12 MP အာရုံခံကိရိယာ၁.၂၅ μmရှိ pixel အရွယ်အစား၊ ၁.၆ apertureအဖြစ်လေဆာ - ကူညီအဆင့်ထောက်လှမ်း autofocus ။ ဒုတိယအာရုံခံသည် monochrome ဖြစ်ပြီးအဓိကကင်မရာသည်5MP ဖြစ်သည်။
အသစ် Moto Z2 Force သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည် ၅.၅ လက်မ Super AMOLED Quad HD မျက်နှာပြင် Motorola ၏ ShatterShield မျက်နှာပြင်နည်းပညာကိုထည့်သွင်းထားပြီးကုမ္ပဏီကပြောကြားသည်မှာမျက်နှာပြင်ပြတ်တောက်သွားမည်ကိုသေချာစေသည်။
အတွင်းပိုင်းတွင် Moto Z2 Force အသစ်သည် Qualcomm Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌4GB RAM ဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြု, ကျန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌6GB နှင့်အတူကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်နေစဉ်။ ထို့အပြင်ယူအက်စ်မော်ဒယ်တွင်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၆၄ ဂစ်ပါရှိပြီးတရုတ်၌မူ 64GB ပါရှိသည်။ ကိစ္စရပ်အားလုံး၌ 128GB အထိ microSD ကဒ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
အပြုသဘောနည်းသောအချက်များအနက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖြစ်သည်။ Z2 Force သည်ယခင်မော်ဒယ်လ်ထက်မီလီမီတာပိုမိုပါးလွှာသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဘက်ထရီစွမ်းအင်သည် ၃၅၀၀ mAh မှဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ 2.730 mAh ဘက်ထရီ, သင်သည်အလွန်အကျွံမကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းနှင့်သံသယရှိစရာမလိုဘဲအသုံးပြုသူများစွာကို TurboPower Moto Mods ဆက်စပ်ပစ္စည်းရရှိရန်တွန်းအားပေးလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် operating system နှင့် ပတ်သက်၍ Moto Z2 Force သည်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည် အန်းဒရွိုက် 7.1.1 Nougat.
Moto Z2 အင်အားသုံးနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
Motorola Moto Z2 အင်အားစု
ဖန်သားပြင် ShatterShield နည်းပညာဖြင့် ၅.၅ လက်မအရွယ် Super AMOLED
resolution ကို Quad HD (2560 x 1440 pixels) - 535 ppi
စီပီယူ Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core 2.35GHz
ရမ်4GB (ယူနိုက်တက်စတိတ်) သို့မဟုတ်6GB (ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ)
သိုလှောင်မှု 64 GB သို့မဟုတ် 128GB microSD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်
အဓိကကင်မရာ 1f/ 12 aperture နှင့်လေဆာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော autofocus ပါသော 2.0 megapixels
အဓိကကင်မရာ2f / 12 aperture နှင့်လေဆာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော autofocus ပါသော 2.0 megapixel monochrome
ရှေ့ကင်မရာf/5aperture ဖြင့် 2.2 megapixels
အာရုံခံကိရိယာ လက်ဗွေ sensor + accelerometer + gyroscope + ဆွဲငင်အား + အနီးကပ် sensor + အလင်းအာရုံခံ + geomagnetic sensor + ultrasound sensor + barometer
ဆက်သွယ်မှု Bluetooth 4.2 (Android O သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် 5.0 သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်) + MIMO နှင့်အတူ NFC + 4G + Wi-Fi 802.11a/b/ g / n / ac 2.4 GHz နှင့်5GHz
GPS စနစ် A-GPS - AGPS - GLONASS
ဆိပ်ကမ်းများ USB Type C + Dual nano-SIM ကဒ်အထိုင် + Moto Mods connector
ဘက်ထရီ 2.730 mAh ဘက်ထရီ
ရှုထောင့် 155.8 76 6.1 မီလီမီတာ
operating system ကို အန်းဒရွိုက် 7.1 Nougat
ချော စူပါအနက်ရောင် - Fine Gold - Lunar Grey
အခြားသူများကို အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း + ရေတွန်းလှန်
စြေး 799.99 $
ယခုအချိန်တွင် Moto Z2 Force အသစ်ကိုယူအက်စ်တွင် Verizon၊ AT&T, T-Mobile, Sprint နှင့် US ဆယ်လူလာများအပြင် Best Buy နှင့် Motorola.com တို့မှတဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများမှာကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာ Verizon တွင်ဒေါ်လာ ၇၅၆ နှင့် Motorola တွင်ဒေါ်လာ ၇၉၉.၉၉ ဖြစ်သည်။
၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချဲ့ထွင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည် ဒီနွေရာသီနှောင်းပိုင်းမှာမက္ကဆီကို၊ ဘရာဇီးနှင့်ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကရှိနိုင်ငံများစွာသို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » Moto Z2 Force နှင့် ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
ဤသည် Motorola မှ Moto 360 ကင်မရာအသစ်ဖြစ်သည်